Nweta ego na -enweghị njedebe na Pou | Androidsis
Nweta ego na -enweghị ngwụcha na Pou
Onyeka Onwenu | | Egwuregwu gam akporo, Nkuzi
Pou aghọwo ihe ịtụnanya, ịbụ anụ ụlọ kacha amasị ọtụtụ ndị na -eto eto na ngwaọrụ mkpanaka, ma ọ bụ gam akporo ma ọ bụ iOS. Anụ ụlọ ga -elekọta ya iji kpuchie mkpa ya niile, gụnyere ịsa ahụ, inye nri, ntụrụndụ na ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ na njedebe ụbọchị.
Maka sistemụ nke egwuregwu ị ga -enwerịrị ego, yabụ ọ dị mkpa inwe ihe zuru ezu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ụdị ọrụ niile. Pou dị mfe iji, ọ na -erikwa ahụ ịmara na ịmara ya ma lekọta ya awa niile enwere ike ime ya ka afọ ju ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta ego na -enweghị ngwụcha na Pou Ị nwere ike soro usoro ole na ole dị mfe anyị ga -agwa gị, ihe niile gbasara iwu na -agbaghị iwu nke ngwa a. Site na nnukwu ego ị ga -enwe ike ịme ihe niile dị ike gị yana karịa, ebe ị nwere ọtụtụ nhọrọ.
1 Kedu ihe bụ Pou?
2 Etu esi ebudata Pou na gam akporo
3 Otu esi ebuli ọkwa Pou ngwa ngwa
4 Otu esi enweta ego na enweghi ngwụcha na Pou
5 Site na Pou Mod APK
6 Na Guardian Egwuregwu
7 Nhọrọ ọzọ iji nweta ego na -enweghị njedebe
8 Nwere Pou na ndabere
9 Site na Pou APK
Kedu ihe bụ Pou?
Pou bụ anụ ụlọ ọbịaỊ ga -elekọta ya nke ọma, n'etiti ọrụ a ga -arụ bụ nke inye nri, ihicha ya, iji ya egwu egwu, ilele ka ọ na -eto ka ọ na -abawanye n'ọkwa. Ị nwere ike kpọghee nzụlite ụlọ na ekike iji jiri agwa a mee ya obi ụtọ.
Ọganihu bụ ịhụ ka Pou si eto, na -egwu ọnụ ụlọ egwuregwu ma na -anakọta mkpụrụ ego, ọ dị mkpa inwe ike igwu egwu na mgbakwunye ịzụta ihe dị iche iche maka anụ ụlọ anyị. Pou nwere ọtụtụ nhazi, na akwa, uwe na okpu, ha niile dị mma iyi ya n'oge ọ bụla.
Ngwa a nwere ọtụtụ ndụ egwuregwu, yabụ na ọ ga -agwụ agwụ na ọtụtụ mgbakwunye, ya mere ọ dị mkpa inwe ego enweghi ngwụcha na Pou. Pou dịkwa na iOS na nyiwe ndị ọzọ, ebe ọ na -enwu dị ka ọ na -eme na gam akporo.
Etu esi ebudata Pou na gam akporo
Ngwa Pou dị n'ime ụlọ ahịa Google Play n'efu, ịbụ otu n'ime ụdị ebudatara. Ọ bụ anụ ụlọ mebere ya nke a ga -eji kporie ndụ ruo ọtụtụ awa, na -adị mma maka ma ụmụaka ma ndị okenye.
Pou na -ewepụta ụda ụfọdụ, ọtụtụ n'ime ha dị mkpa ka mmadụ nwee ike ịga ya nke ọma dịka o kwere mee, gụnyere oge nri. Pou na -ebikarị ndụ dị mma, n'etiti ọrụ ndị a na -emekarị Ha na -aga ịsa ahụ, rie nri, soro ya gwuo obere egwuregwu maka ihe ọchị na ọrụ ndị ọzọ kwa ụbọchị.
Nbudata ahụ bụ n'efu, ngwa ahụ chọrọ naanị otu nkeji iji wụnye ya, ebe nhazi ahụ na -akpaghị aka site na ngwa. Pou zuru oke maka ụmụaka gbara afọ 3 gbagoro, ebe o nwere echiche ndị bụ isi, gụnyere inwe ike lekọta anụ ụlọ anụ ụlọ.
Developer: Zakeh Ltd.
Otu esi ebuli ọkwa Pou ngwa ngwa
Otu n'ime aghụghọ Pou iji mezi anụ ụlọ anyị mebere emepe bụ ibuli ọkwa ngwa ngwa, enwere ụzọ iji mee ka ọ dị mfe. Ihe nzuzo dị na ngwangwa nke metabolism Pou, dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ibuli ọkwa ya site na nke kacha elu ruo n'ọkwa kachasị elu n'ime nkeji ole na ole.
Ihe mbụ bụ inye Pou nri ruo mgbe ọ mara abụba ma agụụ agụkwaghị ya. Gaa na ụlọ nyocha ma zụta ụfọdụ potions akpọ Fat Fater. Ugbu a nye ya ọgwụ ahụ ka ọ felata wee nwetaghachi agụụ gị, wee megharịa nzọụkwụ mbụ na anụ ụlọ ga -agbago ngwa ngwa.
Otu esi enweta ego na enweghi ngwụcha na Pou
Anyị ga -egosi gị otu esi enweta ego na -enweghị ngwụcha na PouSite na nke a ị ga -enwe ike ịme ọtụtụ ọrụ, ebe ọ bụ na nke a bụ akụkụ bụ isi nke ngwa ahụ. Site na ego, a ga -arụ ọrụ ndị bụ isi, na -enweta ngwongwo, yana ike iji nri anụ ụlọ anyị nwee nri, nwee ntụrụndụ na ime ihe niile.
Kwa ụbọchị ị ga -enweta nke nta nke nta, ị ga -enweta mkpụrụ ego ụfọdụ, site na ego a ị ga -enweta ihe, nri, uwe na ngwa dị iche iche. Inwe ike nweta ego na -enweghị ngwụcha na PouN'ime ha bụ isoro anụ ụlọ na -arụ ọrụ, dịka ọmụmaatụ ịsa ya ozugbo ị nwere ike.
Otu n'ime ụzọ iji nweta mkpụrụ ego bụ ịhapụ ngwa ahụ mepere emepe, ọ ga -akwakọba ego ka oge na -aga. Anyị nwere ike imefu mkpụrụ ego na ihe ọ bụla anyị chọrọ, nke kacha mma bụ ịchịkọta ndị niile enwere ike ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụ ihe anyị chọrọ n'ezie.
Site na Pou Mod APK
Wayzọ iji nweta ego na -enweghị njedebe na Pou n'efu na-eji otu ụdị mods ya dị iche iche, gụnyere ama ama Pou Mod APK 1.4.84. Ọ bụ otu ihe ahụ, ọ dị ihe dị ka megabytes 24 ma nwee ụfọdụ mgbanwe, n'etiti ha nwere ike ịnwe mkpụrụ ego na-akparaghị ókè igwu egwu yana ịzụrụ ihe niile anyị chọrọ na ngwa Zakek LTD ama ama (onye nrụpụta).
Ọ bụrụ na imepere ya ozugbo ibudatara ya na ibe ebe a na -akwado mod, ị ga -ahụ na ị nwere ego ịzụta ihe niile, ihe na ihe ọ bụla, gụnyere uwe agwa anyị. Site na mod a, ị nwere mmeghe nke rụzuru yana ihe pụrụ iche, na mgbakwunye na ego enweghi ngwụcha na Pou.
Site na ndabara, onye ọ bụla n'ime ndị egwuregwu nọ na ngwa a nwere mkpụrụ ego na -akparaghị ókè, a naghị ejikarị ha eme ihe, ebe ọ bụ na ha juputara na nkeji nkeji. Ọ dị n'ọtụtụ asụsụ, gụnyere Spanish, yana asụsụ ndị ọzọ dị ka Portuguese, Chinese, Bekee na ọtụtụ asụsụ ndị ọzọ dị.
Budata: Mepụta APK Mod
Na Guardian Egwuregwu
Otu ngwa kachasị mkpa ma a bịa n'ịghọ aghụghọ bụ onye nchekwa egwuregwu ama ama. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ha maka Swiiti anwụrụ Saga na Nsogbu nke Clans, otu n'ime ndị na-eritekwa uru bụ Pou, anụ ụlọ ama ama ama ama nke dị na iOS na gam akporo.
Onye na -ahụ maka egwuregwu na -enye gị ohere ịnweta mkpụrụ ego na -enweghị njedebe na Pou, ezigbo ma ọ bụrụ na ịchọrọ inweta ihe niile, na mgbakwunye na ị ga -enwe ike imepe ọtụtụ ihe. Ịkwalite elu agaghị adị mfe na ngwa ahụ, otu n'ime ọtụtụ na -eme ka ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na -egwu egwuregwu ndị a na egwuregwu ndị ọzọ.
Iji mee nke a, ihe mbụ bụ ibudata onye nche egwuregwu site na akwukwọ ọrụ, anyị na -etinye ya na kaadị ekwentị, anyị na -enye ngwa ma soro usoro ndị a iji mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma:
Pịa na mpaghara ọchụchọ wee lelee nhọrọ mpaghara niile
N'ikpeazụ, pịa "Emela"
Ugbu a, ị ga -ahụ akara ngosi na ngwaọrụ mkpanaka ka ị nwee ike mebie aghụghọ na egwuregwu ndị ahụ dakọtara
Ihe niile dị njikere ịmalite ịrụ ọrụ nke ọma wee nweta ego na -enweghị ngwụcha na Pou, yana ndị ọzọ na aha dị ka Candy Crush, otu n'ime ihe kacha ebudatara na Pou
Nhọrọ ọzọ iji nweta ego na -enweghị njedebe
Pou na -emepe ohere dị iche iche iji nweta ego na -enweghị njedebe yana nhọrọ na -abụghị ngwa. Otu n'ime ha bụ Free Fall, ọrụ na -enye ụgwọ ọrụ na anaghị ewe ogologo oge, n'agbanyeghị na ọ na -ekwe nkwa ihe ọ na -ekwu, dị mkpa iji gaa n'ihu na -arụ ọrụ dị ka otu n'ime ọrụ dị mkpa na ịntanetị. N'ime ihe dị ka nkeji abụọ ị ga -enweta ọtụtụ mkpụrụ ego.
Wayzọ ọzọ iji nweta ego ngwa ngwa na Pou bụ na Find Pou, obere minigame dị egwu kwesịrị ịnwale ma ọ bụrụ na i gwabeghị ya mbụ. Dị ka a ga -asị na nke ahụ ezughi, Icheta bụ nhọrọ ọzọ dị na tebụl, yiri Find Pou, kamakwa Fall Fall.
Ọ dị mkpa ijikọ onye ọ bụla n'ime ha oge niile ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ iji nweta ego mebere iji tinye ego na agwa anyị. Ọ bụrụ na ịchọrọ iji anụ ụlọ anyị mebere ọmarịcha ọdịnihu, nke ga -eto mgbe niile ma ọ bụrụ na -elekọta ya kwa ụbọchị.
Nwere Pou na ndabere
Otu n'ime ụzọ isi nweta ego na -enweghị ngwụcha na Pou bụ idobe ngwa ahụ na ndabere. Ka ọ na -agba ọsọ, ị ga -eji nwayọ chịkọta ego, naanị ihe na -adịghị mma bụ na ị ga -ahụ ka batrị si ada ntakịrị, ebe oriri adịghị elu ma ọlị.
Oriri adịghị oke elu ma ọ bụrụ na anyị nwere batrị, ebe ọ bụ na ngwa na-etinyekarị obere pasent kwa elekere, gburugburu batrị 5-6%. Ọ bụ ngwa na ka oge na -aga, ọ bụrụ otu n'ime arụnyere, na egwuregwu (ngwa) na -aga ihe karịrị nde 500.
Ọ bụrụ na ọ ghe oghe, Pou ga -agbakwunye ego enweghi ngwụcha, mana ihe dị mma bụ ịhụ ego ole a na -enweta n'otu awa. Ngwa ahụ adịla ogologo oge nke ukwuu, nke mere na o nweela oke ibu na Storelọ Ahịa Play, mana ọ bụghị naanị ebe o mere ya.
Site na Pou APK
Otu n'ime ụdị ama ama ama iji nweta ego na -enweghị ngwụcha na Pou bụ «Pou APK», yiri nke a kpọtụrụ aha na mbụ na nke na -enye gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mkpụrụ ego iri. Ọ dị mma maka ndị chọrọ iji nnukwu ego malite, ọbụlagodi na ha nwere ike ịjụ mgbe otu ọnụ ọgụgụ ahụ gwụsịrị (10).
Pou nwere ngwa a nwere ihe niile, uwe, nri na -enweghị ngwụcha na ngwaahịa ndị ọzọ dị ozugbo ị malitere ya, zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwadebe ya ma nye anụ ụlọ gị ihe niile dị okomoko. A na -ebudata Pou APK na ọnụ ụzọ dị iche iche, gụnyere Compucalitv, saịtị ebe akwadoro ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Nweta ego na -enweghị ngwụcha na Pou
Echiche meetic: Ọ bara uru webụsaịtị a ịchọta onye ibe?